Hesekiel 10 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
10 Na migu so rehwɛ no, mihuu biribi te sɛ hoabo+ wɔ bamma+ a ɛwɔ kerubim no atifi no so, biribi a ne hwɛbea te sɛ ahengua.+ 2 Na ɔka kyerɛɛ ɔbarima a ɔhyɛ nwera+ no sɛ: “Kɔ ntwahonan+ no ntam, kerubim no ase. Afei yi nnyansramma+ wo nsa abien mãmã fi kerubim no ntam na tow gu kurow no so.”+ Na ɔkɔɔ mu wɔ m’anim. 3 Bere a ɔbarima no kɔɔ mu no, na kerubim no gyinagyina fie no nifa so, na omununkum ahyɛ mfinimfini adiwo hɔ mã.+ 4 Afei Yehowa anuonyam+ maa ne ho so fii kerubim no so kɔɔ fie no pon ano, na nkakrankakra omununkum hyɛɛ fie hɔ mã,+ na Yehowa anuonyam hyerɛn adiwo hɔ nyinaa. 5 Na kerubim+ no ntaban mu nnyigyei no beduu akyi hɔ adiwo hɔ te sɛ nea ade nyinaa so Tumfoɔ Nyankopɔn rekasa.+ 6 Bere a ɔka kyerɛɛ ɔbarima a ɔhyɛ nwera no sɛ: “Yi ogya fi ntwahonan no ntam wɔ kerubim no mfinimfini” no, ɔkɔɔ mu kogyinaa ntwahonan no ho. 7 Na kerubim biako teɛɛ ne nsa yii ogya+ a ɛwɔ kerubim+ no ntam no de beguu ɔbarima a ɔhyɛ nwera+ no nsam, na ɔno nso gye de kɔe. 8 Na mihuu biribi te sɛ ɔdesani nsa wɔ kerubim no ntaban ase.+ 9 Afei mihui sɛ ntwahonan anan wɔ kerubim no ho—ntwahonan biako wɔ kerubim biara ho+—na ntwahonan no hyerɛn te sɛ sikaberebo. 10 Ná anan no nyinaa di nsɛ, te sɛ ntwahonan a ɛhyɛ ntwahonan foforo mu.+ 11 Sɛ ebiara rekɔ a, ɛnam n’afã anan no so. Sɛ ɛrekɔ a, ɛnnan ne ho; faako a eti no kyerɛ no, ɛhɔ na ɛkɔ. Ɛrekɔ a, ɛnnan ne ho.+ 12 Na aniwa ayeyɛ wɔn honam ne wɔn akyi ne wɔn nsa ho ne wɔn ntaban ne ntwahonan no nyinaa ho mã.+ Baanan no nyinaa wɔ ntwahonan. 13 Ntwahonan no de, metee nne bi wɔ m’asom sɛ, “O ntwahonan!” 14 Wɔn mu biara wɔ anim anan.+ Nea edi kan yɛ kerubim anim; nea ɛto so abien yɛ ɔdesani anim;+ nea ɛto so abiɛsa yɛ gyata anim; na nea ɛto so anan yɛ ɔkɔre+ anim. 15 Na kerubim no sɔree;+ ɔno ara ne honhom abɔde a mihuu no Kebar+ asubɔnten ho no. 16 Sɛ kerubim no kɔ a, na ntwahonan no di wɔn nkyɛn kɔ;+ na sɛ kerubim no ma wɔn ntaban so pagyaw wɔn ho fi asase so mpo a, ntwahonan no nnan mfi wɔn ho.+ 17 Sɛ wogyina a, na agyina; na sɛ wɔma wɔn ho so a,+ na ɛno nso ama ne ho so, efisɛ na abɔde no honhom wɔ ntwahonan no mu.+ 18 Na Yehowa anuonyam+ fii fie no pon ano kogyinaa kerubim no so.+ 19 Afei kerubim no momaa wɔn ntaban so na wopagyaw wɔn ho fii asase so+ wɔ m’anim. Bere a wɔrekɔ no, na ntwahonan no di wɔn nkyɛnmu, na wokogyinaa Yehowa fie pon a ɛwɔ apuei fam no ano, na na Israel Nyankopɔn anuonyam wɔ wɔn so, fi soro. 20 Eyi ne honhom abɔde+ a mihuu no Israel Nyankopɔn agua ase wɔ Kebar+ asubɔnten ho no, na mihui sɛ wɔyɛ kerubim. 21 Baanan yi mu biara wɔ anim anan+ na wɔn mu biara wɔ ntaban anan, na biribi te sɛ ɔdesani nsa wɔ wɔn ntaban ase. 22 Wɔn anim te sɛ anim a mihui wɔ Kebar asubɔnten ho no pɛpɛɛpɛ.+ Na wɔn nyinaa kɔ wɔn anim tẽẽ.+